Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Dean Smith Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Dean Smith gosiputara Eziokwu banyere Nwatakiri Akụkọ ya, Nku ya mbu, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye (Nicola), umuaka, ibi ndu, ndu nke onwe na Wortọ Net.
N'okwu dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ onye njikwa, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Dean Smith's Bio.
Nchịkọta nke ndụ Dean Smith Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara na nka njikwa ya n'akụkụ John Terry enyerela Aston Villa aka n'isi mbido nke 2020-21 EPL.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara banyere akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Dean Smith Childhood Akụkọ:
Maka Biography Starters, ọ na-eburu aha aha "Ginger Mourinho". Dean Smith a mụrụ na 19th ụbọchị Machị 1971 na nne ya, Hilary Smith na nna, Ron Smith na West Bromwich, England. Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụaka abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya na-ese n'okpuru.
Zute otu nne na nna Dean Smith - Hilary Smith (dịka afọ 2021).
Dean Smith Na-etolite ụbọchị:
N'ịbụ onye nna nwere mmasị n'ịgba bọl mere ka onye isi Villa n'ọdịnihu bụrụ okomoko nke ikiri ọtụtụ egwuregwu. Moreso, mgbe ọ bụ nwata, enweghị ọhụụ ọ bụla dị ka ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Dave na-egwuri egwu.
“Echere m na otu ihe nyeere m aka bụ nwanne m nwoke tọrọ m afọ abụọ na ọkara. N'ihi ya, m na-egwu egwu megide ya na ụmụaka ndị toro eto mgbe niile.
Anyị nwere ụlọ akwụkwọ n'azụ anyị. N'ihi ya, ọ bụ mgbe niile ka m rịgooro ebe ahụ ma mee egwuregwu anyị ebe ahụ. ”
N'ụzọ na-akpali mmasị, nna Smith rụrụ ọrụ dị ka onye nlekọta na Trinity Road Stand - ihe ngosi nke mere ka ọ bụrụ onye na-anụ ọkụ n'obi nke Aston Villa. Ọtụtụ mgbe, ụmụnne Smith na-eso nna ha aga n'ámá egwuregwu ebe ha na-ehicha oche maka ohere gafere na Holte End.
Ezigbo Ezinụlọ Dean Smith:
O doro anya na ezinụlọ ya abụghị ụdị agụmakwụkwọ kacha mma. Otú ọ dị, ndị nne na nna Dean nwere ike iji ego ha na-enweta ma nyere ezinụlọ ha aka dị ka ụmụ amaala. Obi dị m ụtọ na nne ya bụ ezigbo onye nwe ụlọ.
N'ihi ya, ọ na-elekọta ihe niile enyere site na nkwenye nke nna ya rụpụtara na Villa Park.
N'obodo ya (West Bromich) nke bụbu obodo bụ ọgaranya na kol na nkume igwe. Ọbịbịa ya na alaka ụgbọ okporo ígwè na ọwa mmiri mere ka ọ dịrị obodo ahụ mfe ịmalite n'oge oge Ọchịchị Mmepe.
N'ihi ya, akụ na ụba West Bromwich bịara bụrụ onye ama ama maka imepụta ihe na injinịa na narị afọ nke 20.
O di nwute, ebe Dean Smith si, nke di na West Midlands, United Kingdom, nwetara usoro nlaazu. Otu n'ime nsogbu akụ na ụba jọgburu onwe ya nke mere na 1970s tara agụụ na nwata.
Dean Smith Biography - Akụkọ nke Football:
N'ụzọ na-akpali mmasị, njem ọrụ ya malitere dị ka Gareth Southgate, onye bu ụzọ gbaa bọọlụ Njikọ tupu ya ewere ọrụ nchịkwa. Na mbido, Smith, onye rọrọ nrọ maka igosi maka klọb kachasị amasị ya (Aston Villa) malitere njem ya na ngalaba nke anọ.
N'oge ahụ, nna ya maara na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ka nwata nwoke na-agba ọsọ egwuregwu debanye aha na otu egwuregwu kachasị elu na 18. N'ihi ya, o mere ka Smith sonyere Walsall dị ka onye na-agbachitere etiti na 1989.
Ihe omuma nke oru ya.
Ndụ Dean Smith Early Life:
Ime ihe ngosi 142 maka Walsall zuru iji mee ka ndị na-achọ egwuregwu chọrọ ọkachamara ya. N'ụzọ dị mwute, e rere Smith na ndị otu nke atọ, Hereford United, na 1994. Agbanyeghị, ego nkwekọrịta ya bụ ego na-agbasa of 80,000 na akụkọ ihe mere eme nke nne na nna ya.
Ọrụ Ọzụzụ Dị ala:
N'agbanyeghị mgbalị niile ọ na-eme iji dọta ndị na-agụ akwụkwọ na ndị isi, Smith mechara sonye na Leyton Orient na 1997. daysbọchị ya na ngalaba nke atọ hụrụ obere olile anya olile anya ka ọ kwagara Sheffield Wednesday (na Ngalaba Mbụ) na 2003.
Naanị ịchọta otu ihe mgbaru ọsọ na 62 anya ma sonyere Port Vale n'afọ na-eso ya mere ka Smith ghọta na ọ gaghị edozi nnukwu ọganihu dị ka onye ọkpụkpọ.
N'ihi ya, ọ kwụsịrị ịgba egwu ya na Jenụwarị 2005 wee kwere ndị mụrụ ya nkwa na ọ ga-ahụ na ọ ga-aga nke ọma dị ka onye nchịkwa.
Lee oge ikpeazụ ya na egwuregwu bọọlụ.
Dean Smith Bio - Afọ ndị mbụ na njikwa:
Nke mbụ, ọ malitere dị ka onye njikwa otu ndị ntorobịa nke klọb ochie ya, Leyton Orient. Mgbe o gosipụtara ike ya dị egwu iji wepụta ndị egwuregwu kachasị mma, a kwalitere Smith ka ọ bụrụ onye isi nchịkwa nke ndị isi Leyton na 2005.
N'ịgbaso ndụmọdụ nna ya, Smith debanyere aha na ngalaba nkuzi Brendan Rodgers. N'ihi ya, ọ nwetara ikikere UEFA Pro na 2008. Site na ọkachamara ya na nchịkwa, ọ hapụrụ Leyton ịchọ ebe ịta nri na-acha akwụkwọ ndụ.
Dean Smith Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
… Nwere Smith naanị ụbọchị iri na asaa ka ọ were ọnọdụ nke Walsall na-adịgide adịgide mgbe ọ ghọrọ onye nchịkwa na-elekọta ya na July 2009.
N'ụzọ na-akpali mmasị, o mere ka ụlọ ọrụ ahụ sie ike site n'ịhapụ ụfọdụ ndị egwuregwu na ịbanye ndị na-agba ọsọ na-eto eto site na mgbazinye ego.
Mmalite nke chi ọbụbọ na ọchịchị.
Site na usoro ya nke igwu egwu, ndị ọkpọ kpọrọ ya Ginger Mourinho. Dị ka Marcelo Bielsa, Smith akasighị ndị umengwụ nke ndị egwuregwu ya ume na pitch.
Nhazi ya zọpụtara Walsall site na mpaghara ọpụpụ ma nweta ọtụtụ nkwekọrịta ọkachamara na klọb dị elu.
Dean Smith Biography - Akụkọ banyere Successga nke Ọma:
N'oge na-adịghị anya, onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ hụrụ onwe ya ka ọ na-emezu okwu ya nye ndị mụrụ ya dịka ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ ya. N'oge na-adịghị anya, ọ nwetara nkwekọrịta ya na Brentford (na 2015) ma jiri ọtụtụ ụzọ ya na-agafe na-eme ndị ọbịa obi ụtọ.
Ọganihu kachasị nke ọrụ ya bịara mgbe a họpụtara ya onye nchịkwa nke Aston Villa na 2018. Obere afọ mgbe ọ bịarutere, Smith duuru Villans ka ọ merie nkwalite site na Championship na EPL.
Dabere na Mkparịta ụka.com, onye nchịkwa Bekee kwuru ka ha kwenye Jack Grealish ịbanye nkwekọrịta nkwekọrịta afọ 5 na ọdụm mgbe ọ drinkingụsịrị obere gbaa.
Site na ike nyocha ya, Dean Smith emeriwo ọtụtụ aha ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Di na Smith Mmekọrịta Ndụ:
Otu n’ime isi ihe mere o ji enwe ike idi nrụgide na esemokwu nke ọrụ ya bụ nwunye ya, Nicola. Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ ya na pitch, ọkara ya ka mma na-alaghachi n'ụlọ iji gwa nwa gị nwanyị ihe mgbaru ọsọ.
Kpoo Nicola, nwanyi n'azu obi uto Smith. Ọchị ha dị n'ogo dị iche iche.
O doro anya na nwunye Smith na-atụ ụjọ nke ukwuu ikiri klọb di ya na-egwu egwuregwu bọọlụ. Ewezuga inyere ya aka ịjụ oyi mgbe arụchara ọrụ ya maka ụbọchị ahụ, Nicola bụ nne nke ụmụ ya abụọ (nwa nwoke na nwa nwanyị).
“A gwara m na agaghị m ehi ezigbo ụra mgbe m banyere n’ọrụ nchịkwa. Ma m na-arahụ ụra nke ọma. N'ụzọ dị mwute, ana m ehi ụra karịa nwunye m, nke yiri ka ọ bụ ya na-arụ ọrụ n'ụzọ ka ukwuu.
Moreso, echeghị m na ọ hụla egwuregwu ọ bụla anyị gara aga 6 ka ọ dị na Julaị 2020. Ada m na-agwa ya ihe niile na-eme na njikere na ekwentị. Eziokwu bụ, ezinụlọ m so n'ihe mere m ji eme nke a ma na-anụ ụtọ ya nke ukwuu. ”
Ndụ nke Dean Smith nke Onwe:
Gịnị na-eme nwata nwoke ahụ ghọrọ onye njikwa nke Aston Villa thick Maka ndị na-ebido ebido, o nwere ngwakọta nke agwa Pisces zodiac. N'elu ala, Smith na-ewe oke iwe mgbe ọ bụla ndị otu ya na-eme ihe ọjọọ ma na-enwe ọubụ mgbe ha na-egwu egwu nke ọma.
Dị ka nke February 2020, e boro ya ebubo na ọ na-ewe oke iwe na John Terry mgbe Southampton nwụsịrị. Ma, ọ gọnahụrụ azọrọ ahụ n'ezoghị ọnụ.
O nwetara ya n'ime ya, mmụọ iji merie mgbe niile. Ka a sịkwa ihe mere ọ na-ewe iwe mgbe ndị otu ya na-egwu egwu.
N'ebe n'egwuregwu football, Smith fọrọ nke nta ka ọ gbadata n'ụwa. Ma ndị egwuregwu ya ma ndị òtù ezinụlọ agbawo akaebe na ọ haziri ahazi, dị umeala n'obi, ma kpebisie ike idozi nsogbu n'adaghị mbà.
Dean Smith Net Net Worth na Web:
Enweghị obi abụọ, ụgwọ ọnwa ya kwa afọ nke million 1.5 (2021 Stats) egosila na ọbụlagodi ndị nkuzi nwere ike ịnakọta nnukwu akụnụba dịka ndị egwuregwu bọọlụ.
N'ịtụlekwa afọ nke ahụmịhe ya, uru Dean abaala kemgbe afọ. N'oge itinye Bio a, Dean Smith nwere atụmatụ Net Net nke £ 8.5 nde.
N'agbanyeghị nnukwu ego ọ na-enweta, Ginger Mourinho ewerewo nzọụkwụ Hansi-Dieter kpatụ aka gaa. N'ezie, ọ na-ebi ndu ndụ na-adịghị agbanwe agbanwe ma na-elebara ụlọ ndị dara oké ọnụ yana ụgbọ ala ndị na-adịghị ahụkebe anya.
Ndụ Dean Smith Ezinụlọ:
Mgbe ọ bụla njem nke njikwa ya siri ike, ọ na-agakwuru ndị ezinụlọ ya maka nkasi obi.
Ha bụ ihe kpatara ya ji enwe ọrụ dị mfe. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Smith, nwanne ya na ndị ikwu ya na ngalaba a.
Banyere Nna Dean Smith:
Papa manịja ahụ, bụ Ron Smith, bụ onye na-elekọta ụlọ (afọ iri abụọ na ise) ma bụrụkwa onye nkwado siri ike nke Claret na Blue. Akụkọ kọrọ na Smith bu ụzọ kpalie ịbanye n'egwuregwu bọọlụ n'ihi ịhụnanya nna ya nwere maka egwuregwu ahụ.
N'ụzọ dị mwute, Mr Ron dara ezigbo ọrịa ma chọpụta na ya nwere isi mgbaka na 2014. Ọ bụ ezie na ndị ezinụlọ ya debere ya n'ụlọ nlekọta, onye England dị afọ 79 butere coronavirus. Mgbe izu anọ nke ọgụ na nje a gasịrị, nna Smith hapụrụ mmụọ.
Banyere nne Dean Smith:
Ọkpụkpụ azụ ọzọ a na-apụghị ịgbagha agbagha bụ nne ya, Hilary Smith. Ọ maghị ihe ọ bụla banyere football ruo mgbe ọ zutere nna ya na 1964.
Ebe ọ bụ na Hilary gbalịsiri ike ịkwado ezinụlọ ya nwere mmasị na bọl, ọ mechara bụrụ onye na-akwado otu egwuregwu niile ha nwere.
Hilary Smith nwere obi ụtọ maka ihe nwa ya rụzuru. Obi abụọ adịghị ya na nke ahụ!
Maara?… Nne Smith hụrụ nkịta n'anya. N'ọtụtụ oge, ọ na-ebukarị ibu ọrụ nke ilekọta nkịta nwa ya mgbe ọ bụla ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ na-eme njem maka egwuregwu pụọ.
Banyere ụmụnne Dean Smith:
Oge nwata ya nwere obi uto n'ihi na nwanne ya nwoke nwere mmasi kasi nma. Smith na Dave bụ naanị ụmụ nne na nna ha.
Ha agabigala oke ma dị njọ kemgbe ha bụ ụmụaka nwoke na nwoke. N'ihi ya, ụmụnne ahụ ghọtara ụdị onye ha bụ ma zere imejọ ibe ha.
Banyere ndị ikwu Dean Smith:
N'oge a na-achịkọta akụkọ ndụ a, anyị ka ga-enweta ozi gbasara nne na nna ya na nne ya. N'otu aka ahụ, nwanne nna Dean na nwanne nna ya yana ụmụ nwanne ya nwoke ka amabeghị.
Dean Smith Eziokwu Eziokwu:
Iji kechie onye nchịkwa Biography, ebe a bụ ihe ole na ole banyere ya nke ahụ ga - enyere gị aka ịmatacha akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Chọpụtara maka ịdị ukwuu:
Tupu ọ rọọ nrọ ịbanye na ọrụ nkuzi, Smith ebuliela iko European. Dị ka a ga-asị na akara aka na-adakwasị ya, nwa nwoke Ron Smith dị afọ 11 bụ onye na-elekọta nwa nke ndị dike nke Rotterdam nke Villa nwetara ikike ibuli ihe agha ahụ.
Kwa Afọ £ 1,500,000
kwa ọnwa £ 125,000
Kwa Izu £ 28,802
Kwa .bọchị £ 4,115
Kwa elekere £ 171
Kwa Nkeji £ 2.9
Nnyocha e mere na-egosi na otu nwa amaala Britain ga-arụ ọrụ afọ abụọ na ọkara iji rite ihe Smith na-enweta n’ime otu ọnwa.
Anyị etinyela nke ọma na nyocha gbasara ụgwọ ọnwa ya. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Dean Smith's Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Aston Villa.
Mourinho anyị dị n'etiti otu ọtụtụ ndị kwenyere na ọdụm abụghị naanị otu egwuregwu bọọlụ kamakwa ọ bụ okpukpe. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ na-agba ndị na-akwado ya ume ka ha debe okwukwe ha na klọb ahụ kwụsie ike ma nwee olileanya maka ụbọchị ndị dị ebube n'ọdịnihu
Eziokwu nke 4: Ranknye adịghị mma Dị ka nke 2020:
N'agbanyeghị na ọpụrụiche n'ịhazi ndị otu Aston Villa, 90min.com ahọrọ Smith dị ka njikwa 18 EPL n'ihu Ole Gunnar Solskjaer. Anyị na-eche na ọkwa ya ga-arị elu karịa ka ọ na-agbasi mbọ ike iburu ndị otu ya karịa ọnọdụ nke iri na tebụl njikọ 2020-21.
N'ezie, Dean Smith Life Story egosila na ịghara ịda mbà bụ ihe mbụ iji nweta ọganiihu. Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na ọ na-ebugharị site n'ebumnuche ime ka nna ya na nne ya dị mpako bụ mkpali zuru ezu iji mee ka ọ nọrọ n'ụkwụ ya.
Obi dị m ụtọ, Smith ghọtara ngwa ngwa na ọ kwesịrị ịgbanwe ọnọdụ ya ka ọ gafere nke ọma n'echiche ezinụlọ ya. N'ezie, mkpebi ya gbanwere ọrụ ya kpamkpam.
Anyị na-aja nne na nna Smith na nwanne nwoke (Dave) maka ịkwado mkpebi ya ịbanye na nkuzi. E wezụga enyemaka ha, ọ gaara adaba n'ọnọdụ amaghị ihe ma ọ bụ ọbụna nke kasị njọ, o yikarịrị ka ọ ga-enwe afọ ojuju.
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ, anyị nwere ekele maka oge gị na Biography a. Jiri obiọma kọọrọ anyị echiche gị banyere Smith's Childhood Story na ngalaba nkọwa. Ọzọkwa, lee nchịkọta Dean Smith's Bio na tebụl n'okpuru.
Aha n'uju: Dean Smith
aha otutu: Ginger Mourinho
Age: Afọ 50 na ọnwa 6
Ebe amụrụ onye: West Bromwich, England
Nna: Ron Smith
Nne: Hilary Smith
Ụmụnne: Dave (Nwanna)
Children: Nwa nwoke na ada
Ezigbo Net: 8.5 nde (2021 stats)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 1.5 nde (ya na Aston Villa)